Ratsirahonana Norbert Lala : Fositry ny fanonganam-panjakana rehetra teto amin’ny firenena -
AccueilRaharaham-pirenenaRatsirahonana Norbert Lala : Fositry ny fanonganam-panjakana rehetra teto amin’ny firenena
14/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mitombina ny filazan’ireo depiote miisa 73 fa tsy manaiky ny fanelanelanana ataon’ny vondrona iraisam-prenena izy ireo amin’izao hetsika ataony izao. Fantatra mantsy fa mandray anjara mavitrika amin’izany fanelanelanana izany izy ireo. Norbert Lala Ratsirahonana no solotenan’i Andry Rajoelina amin’ny fanelanelanana rehetra, ity mpanao politika ity izay efa diso fantatra loatra tamin’ny krizy ara-politika nifandimby teto amin’ny firenena hatramin’izay. Izy ihany koa no fositr’izao fahantrana lalina sy korontana miverimberina eto amin’ny firenena izao. Manam-pahaizana manokana amin’ny fanaovana fanonganam-panjakana mifanohitra amin’ny lalàm-panorenana mantsy i Ratsirahonana. Ity mpanao politika ikoizana ity ohatra no fositry ny fanonganana ny filoha teo aloha Zafy Albert ny taona 1996. Praiminisitra ny tenany tamin’izany, ary nilatsaka nofidiana ho filoham-pirenena taorian’izay fa tsy lanim-bahoaka. Mpahay lalàna ihany koa ny tenany, ary anisan’ireo nantsoina tamin’ny fanitsiana, na fanovana ny lalàm-panorenana teto amin’ny firenena. Izany hoe Ratsirahoanana Norbert Lala izany no anisan’ny fototry ny tsy fahombiazan’ny lalàm-panorenana ka niteraka olana hatramin’izay teto Madagasikara. Ny tena nisongadina tamin’ny fanehoan’ity mpanao politika ikoizana ity ny asany dia ny krizin’ny taona 2009. Izy mantsy no tao ambadik’ireny fanonganam-panjakana namoizana aina Malagasy maro ireny. Amin’izao taona 2018 izao dia io fa mbola miverina indray ny fomba ratsin’ity mpanao politika mamohehitra ity. Hatramin’ny androany mantsy, dia mbola mpanolotsaina manokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina Ratsirahonana Norbert Lala. Izany hoe mbola misitraka ireo tombontsoa rehetra amin’ny maha mpanolotsaina manokana azy, na fiara io na mpiambina manokana io, fa indrina manana birao eny amin’ny lapan’Ambohitsirohitra ihany koa ny tenany. Fitaka be vava, ary famadihana palitao tsotra izao araka izany no nataon’ity mpanao politika noheverina fa raiamandreny ity. Maro araka izany no tezitra noho izao toetra tsy mendrika ataony izao, ka milaza fa manala-baraka an’Antananarivo i Ratsirahonana Norbert Lala, ka tsy tokony hatao ohatra, na alain-tahaka eo amin’ny sehatra fanaovana politika eto amin’ny firenena.
Sahy manizingizina amin’ireo vahoaka mandeha eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ihany koa ankoatra izay ny mpitondra tenin’ireto solombavambahoaka miisa 73, fa tsy hanaiky ny fanelanelanana ataon’ireto vondrona iraisam-pirenena ireto. Anisan’ny misongadina amin’izany ilay filazana fa ny Malagasy ihany no tokony hamaha ny olana fa tsy mila mpanelanelana avy any ivelany. Manana solontena amin’ny fanelanelanana ihany koa anefa izy ireo dia i Hanitra Razafimanantsoa, sy Christine Razanamahasoa. Izany hoe samy manana solontena ao izany na ny Depiote Mapar, ny Tim. Tranga izay efa manamarika fa tsy misy fifampitokisana eo amin’izy ireo hatreto. Ireto solontenan’ny solombavambahoaka miisa 73 ireto indray dia fantatra fa fitadiavan-tseza tsotra izao no katsahiny amin’ireo mpanelanelana. Fantatra ohatra fa mikatsaka mafy ny hatao praiminisitra i Hanitra Razafimanantsoa, raha sanatria ka ny fananganana governemanta iraisana no vahaolana haroson’ireto mpanelanelana. Izay no mahatonga ity solombavambahoaka Tim ity misisika mafy ny amin’ny tokony hametrahan’ny praiminisitra ankehitriny fialana. Efa mazava moa ny an’i Christine Razanamahasoa fa te hiverina ho minisitry ny Fitsarana ahafahana manao valifaty politika.